Ireo tranonkala tsara indrindra hanapahana horonantsary an-tserasera maimaim-poana | Vaovao momba ny gadget
Ignatius Room | | Widgets, Software
Ny fahatongavan'ireo finday avo lenta an-tsena ary rehefa nandroso ny teknolojia dia niova ny fomba ahazoantsika ireo fahatsiarovana tsara indrindra isan'andro isan'andro, davelao ny fakan-tsary fakantsary ho an'ny fampiasana ny finday avo lenta samy amin'ny fakana sary sy horonan-tsary. Isan-taona dia manome fakan-tsarimihetsika tsaratsara kokoa ho antsika ny fakantsary fakan-tsarimihetsika finday, noho izany tsy misy dikany intsony ny manohy mampiasa fakan-tsary mifangaro raha tsy manolotra endrika tsy dia hitantsika amin'ny finday avo lenta.
Ny fampitomboana ny famahana ny fakan-tsary dia toa tsy laharam-pahamehana intsony ho an'ireo mpanamboatra, izay mifantoka amin'ny fampitomboana ny kalitaon'ny horonan-tsary. Fa raha te-hizara horonantsary isika, arakaraka ny faharetany, dia mety terena hametaka azy ireo isika. Ho an'izany, amin'ny Internet dia afaka mahita serivisy Internet samihafa ahafahantsika manao izany haingana sy mora. Atorinay anao izao ny fomba fanapahanao horonan-tsary amin'ny Internet tsy mila mametraka apetraka amin'ny solosaina.
Toy ny fahita amin'ity karazana serivisy an-tserasera ity, amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra dia ilaina ny fametrahana Adobe Flash ao amin'ny solosaintsika raha te-ho afaka hiditra amin'ireo serivisy ireo isika. Ny tranonkala tokana tokony hanaovantsika misintona ny kinova farany an'ny Flash dia ilay an'ny developer, Adobe. Tsy tokony hametraka kinova Flash velively ianao, mainka izany ny fanavaozana ny pejin-tranonkala izay mamporisika antsika hanao an'izany milaza fa efa lany andro izany. Flash dia mampiditra rafitra fanavaozana izay dia hampandre anay rehefa ilaina ny mametraka fanavaozana vaovao an'ity rindrambaiko ity.
1 Tranonkala hanapahana horonantsary an-tserasera
Tranonkala hanapahana horonantsary an-tserasera
Hetezo ny Video Online manolotra fitaovana iray tsy ahafahantsika manamboatra ny horonantsarinay mba ho mora kokoa ny mizara azy, fa mamela antsika ihany koa ahodina izany hatramin'ny 90 ka hatramin'ny 270 degre, maneteza ampahan'ny horonantsary mba hisongadinana kokoa ilay zavatra horonan-tsary, alaivo tsara ny horonantsary an-tserasera avy amin'ny URL na avy amin'ny Google Drive ary mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny endrika azo amidy eny an-tsena izao. Ny haben'ny rakitra faran'izay mamela antsika hanapaka dia mahatratra 500 MB, habetsahan'ny antonony arakaraka ny kalitao nanoratantsika ilay horonan-tsary.
Raha vantany vao nampakatra ny horonantsary izahay ary nanao ny fanovana rehetra avelan'ny rindranasa dia afaka manao izany izahay safidio ny kalitao sy ny endrika tiantsika hampidina azy, mba hahafahantsika mampiasa ihany koa ny Cut Video Online hanovana ny horonantsary aminà endrika hafa nefa tsy mila mametraka rindrambaiko antoko fahatelo amin'ny solosainay. Mazava ho azy fa miankina amin'ny hafainganam-pandehan'ny fifanarahana izay nataontsika ny fotoana handraisan'ity hetsika ity.
AConvert Tsy mamela antsika hanapaka ny horonantsary ankafizintsika fotsiny izy io, fa serivisy koa ahafahantsika manodina azy, manamboatra ny faritra mahaliana indrindra amin'ny horonan-tsary, ankoatry ny famelana antsika hizara azy io ho horonan-tsary roa na maromaro . Ny olana dia ireo fizotran-javatra rehetra tsy maintsy ataontsika tsy miankina fa tsy miaraka azontsika atao amin'ny serivisy amin'ny fizarana teo aloha. Tsy mamela antsika hametraka rakitra fotsiny izy io ary manapaka azy io, fa mamela antsika koa hiditra URL izay misy ilay horonan-tsary tianay hokapaina ary ampidinintsika. Ity serivisy ity tsy mila miasa ny Adobe Flash.
VideoToolbox iray amin'ireo serivisy an-tserasera tsara indrindra azontsika jerena amin'ny Internet rehefa manapaka ny horonantsary misy antsika nefa tsy mila misintona karazana rindranasa. Ity serivisy ity mamela antsika mampakatra horonantsary hatramin'ny 600 MB amin'ireto endrika manaraka ireto: 3GP, AMV, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, M4V, MP4, MPEG, MPG, RM, VOB, WMV. Ho fanampin'izany, ahafahantsika mamoaka ny audio ihany koa ary manampy vaovao, manampy dikanteny, maka ny horonan-tsary, manova ny endrika codec, manampy mari-drano, ny fanapaha-kevitra ary manapaka ny faritra rehetra amin'ilay horonan-tsary mba hamelana ny zavatra mahaliana fotsiny. izahay no betsaka ...
Ny mpamoaka horonantsary an-tserasera an'ny kyoza, serivisy manolotra serivisy anay hanova sary an-tserasera, ahafahantsika manapaka ny horonan-tsary ihany koa ny ampahany lehibe indrindra amin'ny horonan-tsary, fa mamela antsika ihany koa manampy tetezamita amin'ny endrika boky, fihetsehana, jamba ... raha manana horonan-tsary mihoatra ny iray amin'ny editor isika, dia afaka manampy effets toy ny afomanga, bokeh, swirl, glitters ...
Afaka manao izany koa isika manampy lahatsoratra, sarimiaina ary mozika. Ho fanampin'izay, ary raha tsy ampy izany dia afaka manambatra sary sy horonantsary koa isika hamoronana horonantsary mahatalanjona. Ny fiasan'ity serivisy fanovana horonantsary an-tserasera ity dia tena tsotra, satria raha te hanampy ny vokany tsirairay dia tsy maintsy sintominay ho any amin'ilay ampahan'ilay horonan-tsary tiana hampidirina azy izahay.
wincreator manolotra anay mpamoaka horonantsary an-tserasera izay ahafahanay manapaka ny ampahan'ny horonantsary izay tsy tianay. Ireo endrika mifanaraka amin'ny .wmv, mp4, mpg, avi ... Ity serivisy ity Manome antsika famerana 50 MB izany rehefa manapaka horonantsary, noho izany dia mety amin'ny horonan-tsary kely izy io ary raha tsy mikasa ny hanampy effets hafa izahay dia ahodina na tapaho ny faritra manokana amin'ilay video resahina. Wincreator tsy mila Adobe Flash hanapahana ireo horonantsary ankafizinay koa.
Magisto manolotra antsika mpamoaka horonantsary hafa noho ny mahazatra, satria mamela antsika amboary amin'ny dingana telo ny lahatsarinay. Voalohany dia tsy maintsy misafidy ilay horonantsary avy amin'ny kapila misy antsika isika na amin'ny kaonty fitahirizantsika ao amin'ny Google Drive. Amin'ny dingana manaraka dia afaka manapaka ny faritra mahaliana indrindra amin'ilay horonantsary isika ary manampy ny lohahevitra mety indrindra amin'izay tadiavintsika. Amin'ny dingana fahatelo sy farany dia tsy maintsy safidintsika ny feon-kira izay hiaraka amin'ny lahatsarintsika. Tsy toy ny serivisy hafa, raha te hampiasa Magisto, dia tsy maintsy misoratra anarana isika, na amin'ny kaonty Facebook antsika na amin'ny alàlan'ny kaonty Gmail antsika. Tsy mila miasa Adoble Flash.
Con ClipChamp tsy hoe afaka mampakatra horonantsary sy manova azy fotsiny isika, fa afaka manao izany koa firaketana amin'ny alàlan'ny webcam an'ny solosaina. Mikasika ireo safidy natolotry ny ClipChamp ho antsika, dia hitanay ny fahafahan'ny mikapoka horonantsary, mamaky faritra iray amin'ny efijery, manodina ny horonan-tsary, mamadika azy na manitsy ny haavon'ny hazavana sy ny fifanoherana. Toa an'i Magisto, raha te hampiasa ity serivisy ity dia tsy maintsy misoratra anarana amin'ny alàlan'ny kaonty Facebook na Gmail antsika isika, zavatra iray izay afaka mihemotra mihoatra ny iray vao afaka mampiasa ity serivisy ity. Tsy mila Adobe Flash Player koa izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Sary sy feo » Widgets » Tapaho ny horonantsary an-tserasera
Ny Kinde Oasis dia hifanaraka amin'ny Audible amin'ny fanavaozana manaraka